दिल्लीमा युवतीको अपहरण गरेर सामूहिक दुष्कर्म - Hindusthan Samachar Nepali
दिल्लीमा युवतीको अपहरण गरेर सामूहिक दुष्कर्म
27 Jan 2022 18:06:01
नयॉं दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रिय राजधानीमा बुधवार यस्तो घटना घट्यो जसले दिल्लीलाई लज्जित बनाएको छ। शाहदरा जिल्लाको विवेक विहारमा एउटी 20 सालकी महिलालाई उनको घरबाट जबरजस्ती अपहरण गरेर उनीसॅंग क्रूरताको सबै सीमा नाघेको छ। महिलाका साथ तीन जनाले सामूहिक दुष्कर्म, कुकर्म र अप्राकृतिक यौनाचार गर्नुका साथै उनको प्राइवेट पार्टमा खुर्सानीको धूलो हालिदिएको घटना प्रकाशमा आएको छ।
घटनाको समय केटाहरूका परिवारका महिलाहरू पनि त्यहीं उपस्थित थिए र उनीहरूले पनि उक्साउने काम गरिरहेका थिए। यति मात्र होइन, उनीहरूले पीड़ित महिलाको कपाल काटेर मुखमा कालो लगाइदिएपछि जुत्ता अनि चप्पलको माला लगाएर सडकमा घुमाए।
वास्तवमा, केटाहरूका परिवारको छोराले दुई महिनाअघि ट्रेनको अगाड़ी हाम फालेर ज्यान दिएका थिए। प्रेम प्रसङ्गको मामिला बताएर युवतीमाथि केटाका परिवारले आत्महत्याको निम्ति जिम्मेवार ठहराएको थियो। घटनाको सूचना पाएपछि घटनास्थलमा पुगेको पुलिससॅंग पनि आरोपितहरूले निकै दुर्व्यवहार गरे। पछि, महिलालाई भीड़बाट बचाएर थाना पुऱ्याइयो। उनको मेडिकल गराएपछि विवेक विहार थाना पुलिसले अपहरण गरेर सामूहिक दुष्कर्मसहित अन्य धाराहरूमा मामिला दर्ता गरेर चार महिलालाई पक्राउ गरेको छ। नाबालिग केटाहरूका साथै अन्यहरूको खोज चलिरहेको छ।
घटनापछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ट्वीट गरेर घटनालाई लज्जास्पद बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री र एलजीसॅंग यस घटनाको सम्बन्धमा कड़ाभन्दा कड़ा कारबाहीको माग पनि गरेका छन्। यसरी नै दिल्ली महिला आयोगले पुलिसलाई नोटिस पठाएर आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा महिला र उनको परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने आदेश दिएको छ।
जानकारी अनुसार पीड़ित महिला आफ्नो पति र तीन सालको छोरासॅंग अहिले कड़कड़डूमा गाउॅंमा किरायको घरमा बस्छिन्। उनको माइता विवेक विहारको कस्तूरबा नगर क्षेत्रमा छ। आरोपितहरू सांसी समाजका हुन् र गैन कानूनी रक्सीको धंधा गर्छन्। उनीहरूको घर पीड़ित महिलाको माइतमा नै पर्छ। विवाहअघि पीड़ित महिलाको एक नाबालिग केटासॅंग मित्रता थियो। तर, केटाको परिवार उनीहरूको यस सम्बन्धको विरोधमा थिए।
चार साल पहिला पीड़ित महिलाको विवाह सीमापुरीका एक युवकसॅंग भयो। यसपछि, उनी माइता आउॅंदा जहिले पनि उक्त नाबालिग केटासॅंग भेट गर्ने गर्थिन्। केटाका परिवार यसको विरोधमा थिए। यस बीच गत वर्ष नोभेम्बरमा पीड़िताले नाबालिगसॅंग भेट्न अस्वीकार गरिन्। आक्रोशित नाबालिगले 12 नोभेम्बर, 2021 मा विवेक विहारमा ट्रेनको अगाड़ी हाम फालेर आफ्नो ज्यान दिए। केटाका परिवारले पीड़ितालाई यस घटनाको जिम्मेवार मानेको थियो। उनीहरूले यसको बद्ला लिन पीड़िताको खोज शुरू गरेको थियो।
यसै क्रममा उनीहरूले पीड़िता कड़कड़डूमा गाउॅंमा रहेको थाहा पाएपछि केही महिलाहरू त्यहॉं गएर पीड़ितालाई जबरजस्ती अपहरण गरेर लिएर गएका थिए। उनीहरूले पीड़ितालाई कस्तूरबा नगरको एउटा घरमा ल्याएर दुईजना नाबालिग र एकजना अन्य केटालाई सुम्पिए र दुष्कर्म गर्न लगाए।
शाहदरा जिल्लाका डीसीपी आर. सत्यसन्दुरमले भने, महिलाको अपहरण गरेर सामूहिक दुष्कर्म गरिएको मामिला दर्ता गरिएको छ। अहिले चारजना महिलालाई पक्राउ गरिएको छ र अन्य दुईजना महिलालाई हिरासतमा लिइएको छ। भिडियोको आधारमा नाबालिगहरूका साथै अन्यहरूलाई पनि चिन्हित गरिएको छ। उनीहरूको खोज चलिरहेको छ।